फेरि भारत बाट आयो यस्ताे ड’रलाग्दो खबर, मोदी समेत रुन थाले : मन थामेर हेर्नुहोला ! | समाचार
April 17, 2021 NepstokLeaveaComment on फेरि भारत बाट आयो यस्ताे ड’रलाग्दो खबर, मोदी समेत रुन थाले : मन थामेर हेर्नुहोला !
भारतमा कोरोनाभाइरस संक्रमणको स्थिति खराब हुँदै गइरहेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा त्यहाँ रेकर्ड २ लाख १६ हजार ६४२ जना संक्रमित भएको पाइएको छ । पछिल्लो वर्ष संक्रमण शुरुवात भएयता एकै दिन यति धेरै संक्रमित भेटिएको यो पहिलो अवसर हो । यस दौरान १ लाख १७ हजार ८२५ जना निको पनि भएका छन् भने १ हजार १८२ जनाको मृ’त्यु भएको छ ।
लगातारको वर्षाले दैलेखमा घर भत्किँयो, एक महिलाकाे मृ’त्यु